Social Media Marketing – Digital Parmaukkha
Digital Marketer တစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးမြူသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခု
Digital Markter တွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတဲ့ အားသာချက်တွေ၊ မတူတဲ့ Style တွေနဲ့ မတူတဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီ စာလေးကတော့ Digital Marketing ကို စတင်လေ့လာနေတဲ့သူတွေ၊ Semi Professional READ MORE
Digital Marketing မှာ ဘာတွေအားသာလဲ? ဘာတွေအားနည်းလဲ?
ဒီဘက်ခေတ် အနေအထားမှာတော့ Digital Marketing ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အတော်ကို အရေးပါလာပြီး လုပ်ငန်းတိုင်းဟာ ဒီနယ်ပယ်ကို အာရုံစိုက်လာကြပါပြီ။ Industry ထဲမှာလည်း Professional Digital Marketer တွေ တစ်စထက်တစ်စ ပေါ်ပေါက်လာပြီး လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း READ MORE
Facebook Ads ကို Visa/Master Card နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ
Boost, promote (sponsored post) လုပ်နည်းကိုမပြောခင် Visa/master card ရဲ့ ကွားခြားပုံနဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေမှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုအရင်ဆုံး ကျွန်တော်အရင်ဆုံး မျှဝေချင်ပါတယ်။ Visa ကဒ်နဲ့ဖြစ်စေ၊ Master Card နဲ့ဖြစ်စေ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုကို READ MORE
သင့်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကို သူများထက်ရောင်းကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) ချက်
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဈေးရောင်းခြင်းဟာ တစ်နေ့တခြား မြန်မာနိုင်ငံမှာ များပြားလာပြီး အလုပ်လည်းဖြစ်လာသလို၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေရှာလိုသူတွေအတွက်ရော၊ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချလိုသူတွေအတွက်ရော ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ ဈေးရောင်းလို့ကောင်းတဲ့ နေရာကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ရှော့ပင်းဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ကူလှသလို၊ ရှိပြီးသား အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဝက်ဆိုဒ်တွေမှာလည်း ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသွားတင်ပြီးရောင်းလို့ရပေမယ့် ထိရောက်မှုကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်လောက်မရှိပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ READ MORE
Facebook page ဖန်တီးဆိုတဲ့အရာမှာ အခြေခံအားဖြင့်နားလည်သူတွေအတွက်တော့ သိပေမယ့် တော်တော်များများကတော့ အသုံးပြုတဲ့အကောင့်နဲ့ page ကိုမသဲကွဲကြသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ဟာ ကြော်ငြာဖန်တီးဖို့အတွက် အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအကောင့်ကနေတဆင့် ကြော်ငြာ page တစ်ခုကိုသက်သက်ဖန်တီးရပါမယ် page READ MORE
Personal Branding ဆိုတာ ဘာလဲ? Personal Branding ဆိုတာ အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင်တော့ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ အခန်းထဲမှာ ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန် ကျန်တဲ့သူတွေက ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောနေမယ့်အကြောင်းအရာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Branding READ MORE
Facebook လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရော၊ ကမ္ဘာမှာပါ လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ယက် Social Media Platform တစ်ခုဆိုတာ လူတိုင်းသိရှိပြီးသားပါ။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ(၄) နှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ facebook ဟာ ၁၃ နှစ်ကျော်တဲ့ သက်တမ်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာသလို READ MORE
Social Media Marketer တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဥပဒေသများ
(၁) စူးစမ်းခြင်း ဥပဒေသ Facebook လိုမျိုး Social Media ပေါ်မှာ ကာလအလိုက် ရေပန်းစားတဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ Social Media Marketer တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်း (လူငယ်အသိုင်းအဝိုင်း၊ လူကြီးအသိုင်းအဝိုင်း) READ MORE